nepaldoor.com: भारत र चीनको विदेश नीति सन्तुलित छैन ।
विदेश विभाग प्रमुख
मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुने सम्भावना छ कि छैन ?
-यसलाई दुई तरिकाबाट हेरौँ । एकातिरबाट चुनाव मात्र एउटा विकल्प हो भन्ने कुरा आएको छ । तर देशका अगाडि एउटा मात्र विकल्प भन्ने हुँदैन । अर्कोतिर माझीहरूको नियन्त्रणमा रहेको एउटा डुंगा ठूलो तालमा लगेर छाडिएको छ । माझीहरू किनारमा छन् । त्यो डुंगा किनारमा आउँछ र सबैलाई चढाएर गन्तव्यमा पु¥याउँछ भन्ने आशा गरिएको छ । निर्वाचनजस्तो कुरा पार्टीहरूको नियन्त्रणबाहिर जानै दिनुहुँदैनथ्यो । पार्टीकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन नगर्नु कमजोरी भयो । उहाँहरू (शीर्ष नेता) ले अन्तिम बाध्यता आदि इत्यादि भन्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउन एकठाउँमा आइपुगेका नेताहरू बाबुराम भट्टराईकै सरकारलाई निरन्तरता दिने वा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने कुरामा किन एक ठाउँमा आउन सकेनन् ? इतिहासले जबाफ खोज्नेछ ।
परिस्थिति तपाईंले भनेभन्दा निकै अघि बढेको छ र चुनावको मिति नै घोषणा भइसकेको छ । यो मितिमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनिदिनुस् न ?
चुनाव सुनिश्चित भइदिएको भए मलाई किन यो प्रश्न गर्नुपथ्र्यो ? राजनीतिक पार्टीका नेताहरू राजनीतिक ढंगले सोच्नेभन्दा पनि तत्काल कसले कसलाई उछिन्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लाग्नुभयो । अहिले छाडिदिँदा दुई वर्षपछि आफ्नो पार्टीको पोजिसन असाध्यै राम्रो हुन्छ भन्ने धैर्य कसैले राखेका छैनन् । जसका कारण यो स्थिति पैदा भएको हो । अहिले पार्टीहरू आँकलन गर्दैछन् –हाम्रो कति सिट आउँछ ? जसले जित्ने विश्वास राखेको छ, त्यसले चुनाव गराइहालौँ भन्ने । जो धरमरमा छ त्यसले चुनाव टाढा गइदिए हुन्थ्यो भन्ने । अर्को कुरा, यो सरकारका सीमाहरू छन् । जनपरिचालन गर्ने औजार सरकारसँग छैन । ब्युरोक्रेसीले बनेको औजार मात्र छ । केही महŒवपूर्ण दलहरूले यो प्रक्रिया (निर्वाचन) मा नै भाग लिँदैनौँ भनेर शर्त राखेका छन् । उनीहरूका माग सम्बोधन नभएसम्म ठूला दलले हाम्रा कुरा मानेनन् भैगो भनेर उनीहरू खुरुखुरु आउँदैनन् । साना पार्टी त आउँदैनन्, नेकपा–माओवादी जस्तो ठूलै काया भएको पार्टी कसरी आउँछ ? त्यसकारण बिमति राख्ने दलहरूलाई ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराले मंसिरमा चुनाव हुने नहुने निर्भर गर्छ । होइन भने मंसिरमा अर्को सरकार बन्छ । नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको, अशोक राईजीले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई सहमत गराउन सकिएन भने त कसरी निर्वाचन हुनसक्छ ? हकदार राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेर संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ । एक दुई महिना अगाडिपछाडि चुनाव गराउँदा केही फरक पर्दैन । तर चुनावले अशान्तिको बाटो प्रशस्त गरिदियो भने यो देशका लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।
बुँदागत रूपमा भनिदिनुस् कि मंसिर ४ गते नयाँ निर्वाचन हुने, संविधान बन्ने र नेपाल स्थायित्वको बाटोमा जानका लागि के के हुनुपर्छ ?
पहिलो, राजनीतिक प्रक्रियासँग टाढा रहेका दलहरूसँग वार्ता गरेर उनीहरूका जायज र नाजायक मागहरू छु्ट्याएर स्पष्ट कुरा गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई निर्वाचनमा आउने बाटो खुला गर्नुपर्छ । दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आदर्शसँग सम्झौता गर्नुहुँदैन । दस वर्ष संविधान नबने नबनोस् तर मेरै पार्टीले जित्नुपर्छ, मै हुुनुपर्छ भन्ने नाजायज आकांक्षा पाल्नेहरूलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्छ । हिजो राजाले डण्डा लाउने अवस्था थियो र सबै एकठाउँमा आएका थिए । १२ बुँदे भयो, सात पार्टीको एलाइन्स भयो । सबै थोक भयो । आज राजा छैनन् जनतासँग डराउनुपर्छ । चौथो, दलहरू राष्ट्रका हितको पक्षमा एकै ठाउँमा आउनप¥यो । जुनसुकै दलका मान्छेले विदेशीसँग कुरा गर्दा एउटै कुरा गरून्, एउटै प्राथमिकता राखून् ।
मंसिरसम्म चुनाव नहोस् त्यसपछि एमाओवादी ठूलो पार्टीको हैसियतमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ भन्ने सुनिन्छ नि । कुरा यही हो ?
यस्तो होइन । हाम्रो मुख्य सरोकार भनेको प्रमखु राजनीतिक पार्टीहरूले किरणजी, उपेन्द्रजी, अशोकजीहरूको पार्टीहरूसँग सहमति हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
शीर्ष नेताले के आधारमा असन्तुष्ट दलहरू नआए पनि चुनाव गराइन्छ भनिरहेका हुन् ?
उहाँहरूलाई लागेको होला असन्तुष्ट दलहरू स्वतः चुनावी प्रक्रियामा आउँछन् । किरण (मोहन वैद्य) जीलगायत असन्तुष्ट फोर्सहरूलाई पर धकेलेर चुनाव त होला । तर केका निम्ति चुनाव भन्ने औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।
अहिले सत्ता पक्षधर र विरोधी मोर्चाको नेतृत्वमा दुई माओवादी छन् । त्यसकारण गतिरोधको बाधक माओवादी हो भन्दा के हुन्छ ?
तपाईंले अन्तर्यमा गएर हेर्नुभयो भने किरण (मोहन वैद्य) जी र हामीबीच राजनीतिक आचरणमा केही भिन्नता छैन । समग्र राजनीतिक संस्कृतिमा भिन्नता छैन । यो अवस्थामा अलग गुट वा समूह भनेर औचित्यसावित गर्न नै गाह्रो छ । अलग नारा लगाइएको छ तर मुख्य आचरण एउटै छ । हाम्रो पार्टी ठूलो भएकोले उसले गर्ने कमजोरीले राष्ट्रलाई असर गरिरहेको हुन्छ । चुरे भावरको कमजोरीले पार्ने असर र हाम्रो पार्टीले गरेको कमजोरीले पार्ने असर एउटै हुँदैन ।
तर ठूला दलले चुरे भावरजस्ता पार्टीको चासो सम्बोधन गर्ने, नेकपा माओवादीजस्तो पार्टीलाई उपेक्षा गरेर अघि जाने कोसिस गरिरहेका छन् नि ? यसले कहाँ पु¥याउँछ ?
चार दलको सट्टा पाँच दल, छ दल भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा त होला । तर मूलरूपमा त्यहाँ भएको भए उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्योे ? किरणजीहरूमा पनि स्थिरता देखिएन । सैद्धान्तिक राजनीतिप्रतिको निष्ठा र अविचलितपना देखिएन । प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र अहिलेको राजनीतिक मुद्दाको प्रश्नमा उहाँहरूको स्थिरता देखिएन । जनयुद्धको बेसमा कुन्नि के विद्रोह गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यतातिर काहीँ गएको देखिएन । उहाँहरू पनि संविधानसभाकै घेरामा हुनुहुन्छ । यसको विरोध गर्नु पनि त यहीँ बस्नु हो नि । चुनावको विरोधी होइन है भनेर देखाउन पनि उहाँहरूले भरसक चेस्टा गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूबाट केवल जटिलता मात्रै उत्पन्न भएको छ । पार्टी मिलिदिएको भए यो अवस्था उत्पन्न नहुन सक्थ्यो । तर पार्टी सुरुदेखि नै विभाजित भयो । एउटा पक्ष विद्रोह गरेर तुरुन्तै सत्ता कब्जा गर्ने भन्यो । संविधानसभाको निर्वाचन गरेर आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने अर्को लाइन थियो । दुईवटा लाइनको तानातानमा न संविधान बन्यो, न पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत भयो । वैद्यजीहरूले फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएन ।
वैद्यहरूले त आफूलाई राष्ट्रवादी/परिवर्तनकारी, एमाओवादीलाई आत्मसमर्पणवादी भन्नुभएको छ त ?
सबैले आफूलाई केन्द्रमा राखेर भन्छन् र दस्तावेज लेख्छन् । तर अरूले कत्तिको पत्याइदिन्छ र प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो । ५÷६ वर्षयताका घटनाक्रमहरूमा उहाँहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री पनि बन्नुभएकै हो । निर्णय प्रक्रियामा पनि सहभागी हुनुभएकै हो । त्यतिबेला केही बिमति राख्नुभएन । जनतालाई उहाँहरू हामीभन्दा बेग्लै हो भनेर पत्याउन मुस्किल भइरहेको छ ।
तपाईंहरू स्पष्ट छौँ भन्नुहुन्छ तर जनता त तपाईंहरूले ल्याएको परिवर्तनप्रति निराश हुँदै गएका छन् । अहिले निर्णायक शक्ति दलहरू हुन् कि अरू नै कोही हो ?
संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा पहिला विस्थापित भएका शक्तिहरूले प्रशस्त ठाउँ पाउँछन् । त्यसकारण यो बेला क्रान्तिकारी राजनीति दुईवटा कुरामा सचेत हुनुपर्ने हो । पहिलो, प्रतिस्थापित शक्तिले टाउको उठाउन नपाओस् भन्नेमा । दोस्रो, भत्काइएको चीजको सट्टामा नयाँ कसरी गर्ने भन्नेमा । हामीले जसका लागि आन्दोलन गरेका हौँ, उनीहरूका माग राजनीतिको केन्द्रमा हुनुपर्ने हो । तर अहिले देश विकासको फर्मुलाका लागि प्रकाशचन्द्र लोहनीकै लेख पढ्नुपर्ने, कमल थापाले भाषण गर्ने, ज्ञानेन्द्रले देशको चिन्ता लिने अवस्था आउनु भनेको के हो ? हामीले क्रान्तिकारी राजनीतिलाई छाड्दै गएकोले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । पार्टीहरूले अहिले आफ्नो सामाजिक वर्गका आवश्यकतालाई माग बनाउन नसकेको स्थिति छ । जनताले पुरानै व्यवस्थामा फर्कने कुरा त अहिले गरेका छैनन्, तर परिवर्तनप्रति विश्वास पनि गर्न सकेका छैनन् ।
शीर्ष नेताले यो कुरा किन महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ?
दलहरूमा पारदर्शीता भएन । महŒवपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू कसैले अनुगमन गर्दैन । निर्णयमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरियो कि गरिएन भनेर हेर्ने पनि कोही छैन । तर नेताहरूले आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा दाबा गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस किन राजनीतिकरूपमा पुड्को बन्न पुग्यो ? एमाले किन यति पुड्को भयो ? हाम्रो पनि उचाइ बढिरहेको छैन । कांग्रेस र एमाले पुड्का भएकोले मात्रै हामी अग्ला भएका हौँ । नेताहरूले आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । संक्रमणकाल भएका अन्य मुलुकहरूमा हेर्नुस् नेताहरूले तपस्वीजस्तो उदाहरण छाडेका छन् । हामी गान्धीको राजनीतिलाई मान्दैनौँ । बेलायतमा टाइ लगाएको मान्छे भारतमा आएर धोती लगाए, मार्च गरे र भारतलाई जोडे । माओत्सेतुङले आफ्नो खाकीको ज्याकेट कहिल्यै छाडेनन् । उनीहरूलाई पनि त चिल्लो राम्रो लाउन राम्रै हुन्थ्यो होला ।
हाम्रा नेताहरूको आचरण साँचो देशभक्त नेताको जस्तो किन हुन नसकेको हो ?
वास्तवमा नेतालाई जनताको आलोचनात्मक समर्थन पनि नभएको हो । शरीरमा धेरै अंगहरू छन् तर बोल्ने त वाणीसँग सम्बन्धित केही अंगले मात्रै हो । बोल्नमा कुइनाको काम छैन । समाजमा बोल्ने भनेका नेता, प्रोफेसर, वकिल इत्यादि हुन् । राजनीतिको मात्र होइन, तपाईं रंगकर्मीको नेता भएर हेर्नुस्, वकिल, प्रोफेसर, पत्रकारको नेता हेर्नुस् सबैमा ह्रास आइरहेको छ । अरू राम्रा भएको भए त राजनीतिक नेतालाई सबैले दबाबमा पारिहाल्थे नि । एकजना डाक्टर भोकै सुत्दाखेरि सरकारको निर्णय फिर्ता भयो शिक्षण अस्पतालमा । नैतिक बल भएको मान्छे अगाडि आएर साँचो कुरा राखिदिँदा त प्रभाव पर्दोरहेछ नि । यहाँ धेरै प्राज्ञिक, बौद्धिकहरू सार्वजनिक ठाउँमा नेतालाई झट्टी हान्ने, एकान्तमा परेपछि आफ्नै निजी गुनासो गर्ने गर्छन् । अनि कहाँ समाज सुध्रिन्छ ? नेताहरूले विदेशीहरूसँग कुरा गर्दा नेपाली जनता मेरा पछाडि छन्, उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छु भन्ने सोच्दैनन् । नेताहरूले विदेशीसँग म दुईवटा नानीको बाबु हुँ, तीनजना भान्जाभान्जी छन्, तिनलाई पनि पढाउनु लेखाउनु छ भनेर बोलिदिएपछि के हुन्छ ? जब एउटा नेताले देशलाई होइन, परिवारको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको डिलिङ गर्नैसक्दैन ।
हामीले २०४६ को परिवर्तनपछि पनि यही कुरा ग¥यौं, व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर गणतन्त्र ल्याएपछि पनि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भएन, नेताहरूले काम गरेनन् भनिरहेका छौँ । किन हामी यो अवस्थामा छौँ ?
सन्तुष्टि, मोक्ष भन्ने कुरा सांसारिक जगतमा हुँदैन । जोगीहरूले आध्यात्मिक जगतमा यो कुरा हुन्छ भन्छन्, हामी पत्याउँदैनौँ । परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा छैन । दस पन्ध्र वर्षअघि मिडियामा कसको अधिकार थियो ? आज दार्चुलाको किसानको छोरो समाचारवाचक छ । सर्लाहीको किसानको छोरी समाचार लेख्छिन् । अक्षरजस्तो सम्पदामा अधिकार जमाउन आयो नि यो वर्ग । यो ठूलो परिवर्तन हो । जो आयो, त्यसले मिडियालाई आफ्नो वर्गको हितमा संस्थागत गर्न सिपालु भइसकेको छैन । परिवर्तन निरन्तरको प्रक्रिया हो । यसका लागि सतर्कता, आलोचना, आवाज सुझाब चाहिन्छ ।
तपाईंले पटकपटक जनता आउनुपर्छ भन्नुभो । दलहरूकै अगुवाइमा जनताले राजतन्त्र फालेका हुन् । राजनीतिक दलबाहेक जनताको बेग्लै राजनीतिक संगठन के हुन्छ ? जनताले कसरी नेतालाई खबरदारी गर्ने ?
पृथ्वीको सतहमुनिबाट ज्वालामुखी तातेर बाहिर निस्किने बेलामा त्यसले असाध्यै नरम भाग खोज्छ । यदि त्यो भेटेन भने पड्काइदिन्छ । अफगानीस्तानमा रूसको विरोध गर्ने कुन पार्टी थियो ? रूसले हमला गरेपछि राजनीतिक पार्टीको हालत के थियो त्यहाँ ? बीसौं टुक्रामा बाँडिएका त्यहाँका कविलाहरू वारलर्ड (युद्धसरदार) थिए । उनीहरूले रूसको कसरी प्रतिकार गरे ? कहीँ बुढालाई अघि लाए । कहीँ मास्टरलाई अगाडि लगाएर रूसको प्रतिरोध गरे । परिस्थिति आएपछि जनताले कसैलाई न कसैलाई अघि लाइहाल्छ नि । तीस वर्षदेखि इमान्दारीपूर्वक लुगा सिएर बसेको व्यक्तिलाई काठमाडौंका पचास हजार मान्छेले गएर तपाईं नै हो नेता भनेर अघि लाए भने के हुन्छ भन्नुस् त ? यी नेताबाट काम भएन भन्नेमा जनता पुगेपछि यसरी आउन सक्छन् । अहिले के लाग्या छ भने चीज बिग्रेको छ तर पूरै खत्तम भइसकेको छैन । जब सबै बिग्रेको भन्ने लाग्छ, जनताले कुनै कुनाबाट लुगा सिउने मान्छेलाई अघि सार्लान् । कहीँबाट पच्चिसौँ वर्षदेखि चौकीदारी गरेका व्यक्तिलाई लौ तपाईं नै नेता हो भनेर अघि लाउलान् ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको सात वर्षसम्म संविधान बन्न सकेन । संक्रमणकाल लम्बिँदो छ । एउटा राष्ट्रको जीवनमा यस्तै हुन्छ कि हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेका हौँ ?
सामन्ती युगबाट प्रजातन्त्रको युगमा प्रवेश गर्नु जटिल प्रक्रिया हो । युरोपमा कति ठूलो बलिदान गर्नुप¥यो । हामीले कम क्षतिमा संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । राम कार्कीको जीवनमा, तपाईंहरूको जीवनमा त संक्रमणकाल लामो भयो । नेपाल राष्ट्रको जीवनका लागि यो संक्रमणकाल लामो अवधि होइन । तर जहिले पनि आफूले भोगेकै बेलाको जाडो धेरै हुन्छ । अहिले हामी खपिरहेका छौँ । यो बोझिलो र अत्यासलाग्दो देखिएको छ । तर अहिले नै आत्तिइहाल्नुपर्ने, निराश हुनुपर्ने जरुरी छैन । खबरदारी गरिरहनुपर्छ । सबैको एउटा युग हुन्छ । अश्वमेघ यज्ञ सकेपछि अर्जुनको गान्डिभले पनि काम गर्न सकेन । किनभने त्यसको युग सकिइसकेको थियो । यहाँ कतिपय नेताको युग सकिइसकेको छ । अब ल्याकत र क्षमता नेतालाई स्थापित गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि नेता तहगत चरण पार गरेरै नेतृत्वमा पुग्ने होइन र ?
सबै कुरा तजबिजले चल्ने हो । तर तपाईं सिंहदरबारमा जानुस् त बरियता मिचियो भनेर सचिवहरू रोइराख्या छन् । पार्टीहरूको हालत त्यस्तै छ । एमाओवादीका बारेमा मलाई भन्न अप्ठरो छ । कांग्रेसमा हेरौँ । भीमबहादुर तामाङको मृत्युपछि कति नेताहरू पत्रिकामा रोए । मरेपछि रुनेहरूले कम्तीमा जीवित छँदा भीमबहादुरलाई सघाइदिएको भए असल मान्छेलाई प्रोत्साहन हुन्थ्यो नि । त्यो भएन । कांग्रेसका मान्छे हाम्रो नेतृत्व निकम्मा भयो भनेर कुदिराख्या छन् । उचित समयमा उचित जिम्मेवारी दिएको भए नेतृत्वको विकास हुन्थ्यो । धेरै नेताहरू जिम्लिएर गए । पानी जिम्लिन थाल्यो भने उम्लिँदैन । राजनीतिक पार्टीहरूमा जिम्लिएका मान्छे खोज्नुभो भने सयौँ भेटिन्छन् ।
फरक प्रसंग, एकपटक बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभयो कि राष्ट्रपति कांग्रेसका नेता हुन् । राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेयता विभिन्न प्रक्रियामा उहाँको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
हाम्रो पार्टीमा यसबारे संस्थागत छलफल भएको छैन । राष्ट्रपतिको राजनीतिक जीवन हाम्रो पार्टीबाट सुरु भएको होइन भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर उहाँले बाहिर सालिन भूमिका निर्वाह गरेको हामी पाउँछौँ । कतिपय ठाउँमा सबै पार्टीलाई चित्त बुझाउन सक्ने कुरा पनि हुँदैन । कहिलेकाहीँ दिएको वचनमा पनि उहाँ अडिन सक्नुभएन भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ । अहिले उहाँ बिरामी भएर जानुभएको हुनाले उहाँका बारेमा केही नगरौँ । दुईचार दिन राम्रो सम्बन्ध हुँदा तारिफको पुल बाँधिहाल्ने, एउटा घटनामा आपूmले भनेजस्तो भएन भने गाली गरिरहने संस्कारबाट माथि उठ्नुपर्छ ।
अब विदेश मामिलाबारे कुरा गरौं । तपाईंले अगुवाइ गरेको एमाओवादीको विदेश विभाग के गर्दैछ अहिले ?
विदेश विभागबाट हामीले विभिन्न देशका राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छौँ । नेपाललाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने हिसाबले भारतका धेरै राजनीतिक दलहरूसँग हाम्रो संस्थागत सम्बन्ध हुनुपर्छ । त्यस्तो सम्बन्धले हाम्रोजस्तो सानो देशलाई ठूलो सकारात्मक असर पार्छ । ठूलो देशसँग हामी जे कुरा भन्न डराइरहेका छौँ, त्यही कुरा भारतीय नेताहरूले सजिलै भनिदिन्छन् । त्यसकारण हामी सम्बन्ध संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।
हामीले छिमेकीसँग कहिले लड्दै कहिले सम्झौता गर्दै देशलाई बचाएर ल्याएको इतिहास बोकेका छौँ । हामी चीन र भारत दुवैसँग पटकपटक लडेका छौँ । उनीहरूको साइज ठूलो छ, सेना धेरै छन् भनेर हामीले हात उठाएर आत्मसमर्पण गरेका छैनौँ । छिमेकी भएको हुनाले हामीले डिल गर्नैपर्छ । हामीलाई भारत चीनको बडा जरुरी छ । उनीहरूलाई पनि हाम्रो जरुरी छ । उनीहरूको जरुरत हामी हौँ भन्ने कुरा बिर्सेर हामीले उनीहरूलाई फुल्याउन थाल्यौँ भने के हुन्छ ? अहिले त्यो भइरहेको छ । हामी युरोपका करिब १५ वटा पार्टीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ ।
हामीले राजनीतिक कुटनीतिसँगै आर्थिक कुटनीति अघि बढाउनुपर्छ भनेर जानकार व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले तपाईंको देशले कुन राजनीतिक प्रणाली अँगालेको छ भन्नेभन्दा पनि तपाईंको देशमा म के बेच्नसक्छु भन्ने कुराको आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढ्न थालेका छन् । त्यसकारण आर्थिक कुटनीतिका बारेमा हामीले छलफल चलाउनु जरुरी भइसकेको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली मजदुरहरूको हितलाई कसरी मद्दत पु¥याउन सक्छौँ भनेर कन्सेप्ट बनाउन लागेका छौँ । हाम्रो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ स्पष्टरूपमा पहिचान गर्नुप¥यो भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे छलफल चलाएको थियो, फेरि पनि केही दिनमा छलफल हुँदैछ । कसैसँग सम्झौता गर्न नसकिने नेपालको साझा राष्ट्रिय स्वार्थ तय गरौँ भन्नेमा पुगेका छौँ ।
विदेश विभागलाई पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले मतलब नगरेजस्तो देखिन्छ नि किन ?
अहिले प्रमुख नेताहरूले विदेश विभागलाई जानकारी दिने गर्नुभएको छ । पहिला कतिजना हाम्रा नेता विदेश पुग्या छन्, कसले बोलाएर किन गएका हुन् थाहै हुँदैनथ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भारत जाँदा मलाई पनि जाऔँ भन्नुभएको थियो । म अस्ट्रेलिया जानुपरेको हुनाले गइन । निकट भविष्यमा हामी जापान जाँदैछौँ । बाबुरामजी कतार, अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्नुभो । उहाँले पनि भन्नुभएको थियो ।
नेपाली राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपको कुरा आइरहन्छ । पछिल्लो सरकार निर्माण, निर्वाचन घोषणाासमेतका कुराहरूमा विदेशी हस्तक्षेप छ भन्ने गरिएको छ । अहिले हामी साँच्चै हस्तक्षेप वा दबाबमै छौँ ?
वायुमण्डलमा हावा कहिल्यै खाली रहँदैन । तातो हावा वाफ बनेर उडेपछि खाली ठाउँमा अर्को हावा तुरुन्तै भरिन्छ । हामीले स्पेस दिएपछि अरूहरूले त्यो स्पेस लिन्छन् । हामीले उत्तेजित भएर भारतलाई चुनौती दिने, हामी लड्छौँ या गर्छौँ त्या गर्छौँ, हाम्रा बलभद्र भन्ने पनि ठीक कुरा होइन । भारत हामीभन्दा धेरै बलियो छ भनेर लम्पसार पर्ने कुरा पनि होइन । भारतसँग लड्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ भारतको अगाडि सास फेर्नै हुँदैन भन्ने होइन । भारतले हित भन्ने गरेका कुरा कति जायज÷नाजायज छन् भन्न सक्नुपर्छ । हामीले त नाजायज हितका के कुरा गर्न सकौँला र भारतसँग, तर आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । अफगानिस्तान वा बाल्कनमा ब्याटलफिल्ड खोल्नेजस्तो बेकुबी अहिले चीन र भारतले नेपालमा गर्दैनन् । किनभने नेपाल अशान्त भयो र दीर्घकालीन युद्धमा फस्यो भने भारत र चीनले गरिरहेको उन्नतिमा नै गम्भीर नकारात्मक असर गर्छ ।
छिमेकीहरूको स्वाभाविक चासो देख्नुहुन्छ कि आफ्नो पक्षमा पार्न दबाब पनि ?
भारत र चीनको विदेश नीति सन्तुलित र आदर्श खालको छैन । । तर ठूला देशसँग कुराकानी गर्दा नेताको व्यक्तित्वले पनि ठूलो काम गर्दोरहेछ । साना देशका ठूला साइजका नेताले विश्व राजनीतिमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नासेर कुनै ठूलो देशका दिएनन्, त्यो बेला भारत कुनै ठूलो देश थिएन । तर नासेर, नेहरूले असंलग्न आन्दोलनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरे । साना देशमा जन्मेर पनि विश्व राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्न सके ठूला साइजका नेताले । अहिले हामी कति दबाब झेलिरहेका छौँ, सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री हुँदा बीपी कोइरालाले कति दबाबको सामना गर्नुप¥यो होला ? यत्रो जागरणसहित गणतन्त्र आएको नेपालमा त हामी विदेशी दबाबको कुरा गरिरहेका छौँ भने त्यतिबेला कस्तो थियो होला ? हामीले पनि आफ्ना कुरा भन्न सकिरहेका छैनौँ, उनीहरू (भारत) को पनि औपनिवेशिक नीतिको तुष अझै बाँकी रहेको हुनाले असहजता भइरहेको छ ।
नेपालमा पछिल्लोपटक चीनको चासो बढ्दै गएको हो ?
नेपालमा चीन अलिक बढी इन्गेज हुन चाहेको छ । आर्थिक र सैनिक शक्ति बढेपछि उसले भूमिका बढाउनु स्वाभाविकै हो । नेपालसँग मात्र होइन, भारतसँग पनि चीन इन्गेज भइराख्या छ । चीन र भारतलाई हिजो एक अर्काका प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिन्थ्यो । अहिले चीन अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँतिर उक्लिँदैछ भनिन्छ । अमेरिकाले अलिक बढाइचढाइ गरेको देख्छु म । भारतले परम्परागतरूपमा नेपालका बारेमा बढी चासो राख्ने गथ्र्यो । तर औषधीको धेरै डोज दिइयो भने त्यसले शरीरलाई नकारात्मक असर पार्छ । म चाहिँ विदेशी सद्भावना आवश्यकताभन्दा बढी नहोस् भन्ने चाहन्छु । नेपाललाई पैसा के कति चाहिन्छ, के के मेसिन चाहिन्छ दिन्छौँ, आन्तरिक कुराहरू आफैँ मिलाउनुस् भनेर एक डेढवर्ष छिमेकीहरू चुपचाप बसिदिने हो भने नेपालीहरूले संविधान पनि बनाउँछन् । देश अगाडि पनि जान्छ ।
(हिमालय टाइम्स नेपाली दैनिकमा शुक्रवार प्रकाशित अन्तर्वार्ता । हिमालय टाइम्सका सम्पादक गोविन्द लुइँटेल र समाचार संयोजक पर्शुराम काफ्लेले यो अन्तर्वार्ता लिएका हुन् ।)
Labels: अन्तरवार्ता, समाचार
Unknown 8 October 2016 at 00:47
तपाईं नयाँ व्यवसाय वा व्यापार विस्तार लागि सुरु गर्न एक ऋण आवश्यकता छ? तपाईं व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी .सबै तपाईं आवश्यक 2% को ब्याज दर मा ऋण को सबै प्रकार प्रस्ताव आज हामीलाई एक स्पर्श इमेल र आफ्नो समस्याको हामीलाई सम्पर्क गर्दै @ (voldstephenhanslloanfirm@gmail.com)